COVID-19 ကွောငျ့ ဝနျထမျး ၉၀၀၀ နီးပါး လြှော့ခသြှားမညျလို့ဆိုလာတဲ့ နညျးပညာကုမ်ပဏီကွီးတဈခု။ – SoShwe
Home/Tech/COVID-19 ကွောငျ့ ဝနျထမျး ၉၀၀၀ နီးပါး လြှော့ခသြှားမညျလို့ဆိုလာတဲ့ နညျးပညာကုမ်ပဏီကွီးတဈခု။
COVID-19 ကွောငျ့ ဝနျထမျး ၉၀၀၀ နီးပါး လြှော့ခသြှားမညျလို့ဆိုလာတဲ့ နညျးပညာကုမ်ပဏီကွီးတဈခု။
Boeing 787 နဲ့ Airbus A350 လယောဉျတှကေို တညျဆောကျပွုလုပျရာမှာလိုအပျတဲ့ စကျပစ်စညျးတှကေို ထုတျလုပျပံ့ပိုးပေးတဲ့ Rolls-Royce ကုမ်ပဏီက ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာ ကုမ်ပဏီအတှကျ အလုပျလုပျပေးနတေဲ့ ဝနျထမျးပေါငျး ၅၂,၀၀၀ ထဲကနေ အနညျးဆုံး ဝနျထမျးဦးရေ ၉ဝဝဝေ လာကျကို လြှော့ခသြှားမညျဖွဈကွောငျး ပှငျ့လငျးစှာဖှငျ့ဟဝနျခံခဲ့ပါတယျ။
ဘာကွောငျ့မြား ဝနျထမျးဦးရကေို လြှော့ခမြှာလဲ? ဆိုတော့ အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျးပဲ ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာဖွဈပျေါနတေဲ့ ကပျရောဂါဆိုးကွီး COVID-19 ကွောငျ့ပဲဖွဈပါတယျ။ ကပျရောဂါဆိုးကွီးရဲ့ လှမျးမိုးမှုဟာ ပညာရှငျတှေ ခနျ့မှနျးခဲ့တာထကျကို ပိုပွီးဆိုးရှားလာနပေါပွီ။
ကုမ်ပဏီက ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူတဈဦးရဲ့ ပွောကွားခကျြအရ ကပျရောဂါဆိုးကွီးကို တိုကျထုတျနိုငျပွီးတဲ့အခါမှာ ကပျရောဂါဆိုးကွီးမပျေါပေါကျလာခငျတုနျးကလိုမြိုး လုပျငနျးတှေ ပွနျလညျပတျနိုငျပါ့မလားဆိုတာကို စိုးရိမျနကွေပါတယျ။ ဝနျထမျးဦးရလြှေော့ခဖြို့အပွငျ လုပျငနျးသုံးစရိတျတှကေိုလညျး တတျနိုငျသမြှလြှော့ခသြှားဖို့ စီစဉျနတေယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
Rolls-Royce ကုမ်ပဏီက CEO Warren East က “ကပျရောဂါဆိုးကွီးရဲ့ ရိုကျခတျမှုဒဏျကို အံ့တုခံနိုငျဖို့အတှကျ ကုမ်ပဏီမှာ အောငျမွငျမှုတှရေရှိဖို့ အစှမျးကုနျကွိုးစားပေးခဲ့တဲ့ ဝနျထမျးတှကေို လြှော့ခပြဈဖို့ဆိုတာဟာ တကယျကို စိတျမသကျသာဖှယျ ဆုံးဖွတျခကျြကွီးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခုလိုမြိုး အရာရာမတညျငွိမျသေးတဲ့ အခြိနျကာလတဈခုမှာ ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာရှိတဲ့ အစိုးရတှကေလညျး ကိုယျ့နိုငျငံက စီးပှားရေးလှုပျရှားမှုနှုနျး လုံးဝမရပျတနျ့သှားစဖေို့အတှကျ တတျနိုငျသမြှ ကွိုးစားလုပျဆောငျပေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဗွိတိသြှနိုငျငံ အလုပျသမားအစညျးအရုံးက အထှထှေေ လကျထောကျအတှငျးရေးမှုး Steve Turner က “Rolls-Royce ကုမ်ပဏီရဲ့ ဝနျထမျးလြှော့ခရြေးသတငျးဟာ ကုမ်ပဏီအတှကျ အခြိနျတှေ အငျအားတှေ ရငျးနှီးပွီး အပတျတကုတျအလုပျကွိုးစားပေးခဲ့တဲ့ သစ်စာရှိတဲ့ဝနျထမျးတှရေဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှကေို ဖကျြဆီးလိုကျသလိုမြိုး ဖွဈသှားတာဟာ အတျောလေးကို ရှကျစရာကောငျးတယျ။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
COVID-19 ကြောင့် ဝန်ထမ်း ၉၀၀၀ နီးပါး လျှော့ချသွားမည်လို့ဆိုလာတဲ့ နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု။
Boeing 787 နဲ့ Airbus A350 လေယာဉ်တွေကို တည်ဆောက်ပြုလုပ်ရာမှာလိုအပ်တဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်လုပ်ပံ့ပိုးပေးတဲ့ Rolls-Royce ကုမ္ပဏီက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ကုမ္ပဏီအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၅၂,၀၀၀ ထဲကနေ အနည်းဆုံး ဝန်ထမ်းဦးရေ ၉၀၀၀ေ လာက်ကို လျှော့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပွင့်လင်းစွာဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
ဘာကြောင့်များ ဝန်ထမ်းဦးရေကို လျှော့ချမှာလဲ? ဆိုတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကပ်ရောဂါဆိုးကြီး COVID-19 ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုဟာ ပညာရှင်တွေ ခန့်မှန်းခဲ့တာထက်ကို ပိုပြီးဆိုးရွားလာနေပါပြီ။
ကုမ္ပဏီက ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးရဲ့ ပြောကြားချက်အရ ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကို တိုက်ထုတ်နိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးမပေါ်ပေါက်လာခင်တုန်းကလိုမျိုး လုပ်ငန်းတွေ ပြန်လည်ပတ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဝန်ထမ်းဦးရေလျှော့ချဖို့အပြင် လုပ်ငန်းသုံးစရိတ်တွေကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှလျှော့ချသွားဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Rolls-Royce ကုမ္ပဏီက CEO Warren East က “ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို အံ့တုခံနိုင်ဖို့အတွက် ကုမ္ပဏီမှာ အောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို လျှော့ချပစ်ဖို့ဆိုတာဟာ တကယ်ကို စိတ်မသက်သာဖွယ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလိုမျိုး အရာရာမတည်ငြိမ်သေးတဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ အစိုးရတွေကလည်း ကိုယ့်နိုင်ငံက စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုနှုန်း လုံးဝမရပ်တန့်သွားစေဖို့အတွက် တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဗြိတိသျှနိုင်ငံ အလုပ်သမားအစည်းအရုံးက အထွေထွေ လက်ထောက်အတွင်းရေးမှုး Steve Turner က “Rolls-Royce ကုမ္ပဏီရဲ့ ဝန်ထမ်းလျှော့ချရေးသတင်းဟာ ကုမ္ပဏီအတွက် အချိန်တွေ အင်အားတွေ ရင်းနှီးပြီး အပတ်တကုတ်အလုပ်ကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့ သစ္စာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ဖျက်ဆီးလိုက်သလိုမျိုး ဖြစ်သွားတာဟာ အတော်လေးကို ရှက်စရာကောင်းတယ်။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Previous အရှသှေ့ားတှေ ပဲ့သှားခဲ့ရတဲ့ အဆိုတျော Jason Derulo
Next ဝနျထမျးတှရေဲ့လစာကိုလြော့ခမြယျလို့ဆိုလာတဲ့ လူမှုကှနျယကျကုမ်ပဏီကွီးတဈခု။